Magaalada Boosaaso oo lagu gubay khamri iyo xashiis – Somali Top News
Magaalada Boosaaso oo lagu gubay khamri iyo xashiis
Laamaha amaanka Puntland ayaa maanta soo bandhigay khamri iyo xashiish lagu soo qabtay howlgal ka dhacay gudaha magaalada Boosaaso.
Khamriga iyo xashiishkan oo lagu soo qabtay howlgal ay ciidamada amaanka ka fuliyeen xaafadaha magaalada Boosaaso ayaa ay saraakiisha ciidamadu amaanku sheegeen in lasoo qabtay xili la doonayay in lagu waxyeeleeyo bulshada isla markaana habab ganacsi ah loo isticmaalo.
Taliyaha ciidanka Booliska Puntland Gen.Muxiyadiin Axmed Muuse,Xeer ilaaliyaha maxkamadda darajada koowaad ee gobolka Bari,Gudoomiyaha Maxkamada Gobolka iyo gudoomiyaha gobolka Bari Yuusuf Maxamed Waceys Dhedo ayaa meel fagaaro ah kusoo bandhigay khamriga iyo xashiishka lasoo qabtay iyagoona wacad ku maray in tilaabo sharci ah laga qaadayo dadka caadeystay ka ganacsiga iyo isticmaalka maandooriyahan Khamriga loo yaqaan.
Ugu dambeyn masuuliyiinta ayaa dab qabadsiiyay dhalooyin iyo baco ay ku jiraan khamriga iyo xashiishka lasoo qabtay iyadoona ijntaasi kadib masuuliyiinta sheegeen in uu soconayo howlgalada lagula diririyo waxyaabaha maandooriyaha ee lasoo galiyo gudaha Puntland iyo dhamaan wixii lidd ku ah amaanka guud ee Puntland.
← Puntland President Unveils New Cabinet
Wasiirka gaadiidka iyo duulista Hawada Soomaaliya oo wado olele xoog leh →
Xog dheeraad ah oo laga helay Dabaq uu wasiir Bayle ka dhisanayo magaalada Hargeysa
Keydkii ugu weynaa ee hubka Al shabaab oo gacanta lagu dhigay+Sawirro
Kooxdii Qaranka ee Manishiibiyo oo dib loo howlgeliyay